Igwe nju oyi nke azụmahịa, ime ụlọ oyi, ngalaba na-ekpo ọkụ - Runte
Nka na ụzụ mmepụta
Ngosipụta friji nke azụmahịa
Ọnụ ụzọ Glass Chiller kwụ ọtọ
Ọnụ ụzọ Glass kwụ ọtọ friza
Igwe ihe ngosi anụ ọhụrụ
Ihe ngosi ihe ngosi nri Deli
Gosi ije na oyi
Ụlọ oyi/ Nchekwa
Nchekwa mkpụrụ osisi na akwukwo nri
Ngalaba condensing Semi-hermetic
Ọrụ ime ụlọ oyi
Gosipụta ihe nrụpụta ngwa nju oyi
Ụlọ ọrụ anyị na-emepụta ma na-ere ụdị ngwa nju oyi dị iche iche. Ngwaahịa ndị bụ isi bụ friji na friza, ọnụ ụlọ oyi, akụkụ condensing na igwe na-eme ice, wdg. A na-asọpụrụ anyị ijere ihe karịrị mba 60 na mpaghara, yana ọnụ ahịa ahịa kwa afọ nke 20 nde US dollar, nnukwu ọrụ anyị gụnyere RT-Mart. , Beijing Haidilao Hotpot Logistics oyi ụlọ, Hema Fresh Supermarket, Seven-Eleven Convenience Stores, Wal-Mart Supermarket, wdg Na magburu onwe àgwà na ezi uche ahịa, anyị meriri a nnọọ elu aha n'etiti anụ ụlọ na mba ọzọ ahịa.
Tọrọ ntọala na 2003
Ahụmahụ afọ 18
Karịrị ụdị ngwaahịa 4
Ihe karịrị ndị ọrụ 300
Ngosipụta friji / friza
Ụlọ Nchekwa oyi
Obere ala 5 Layer Shel...
Video Open Chiller Parameter Anyị nwere ụdị 2 nke chiller a na-emeghe 1. obere chiller mepere emepe nwere shelf 5 n'ígwé 2. chiller nkịtị na-emeghe na shelf 4. Ị nwere ike ịhọrọ n'efu dabere na ihe ị chọrọ. Ụdị Ụdị Mpụga Mpụga (mm) Oke Okpomọkụ (℃) Mpịakọta dị irè (L) Mpaghara ngosi (m³) GLKJ Mepee Chiller ( shelves 4) GLKJ-125F 1250*910*2050 2~8 960 1.42 GLKJ-1857F 18 2050 2~8 1445 2.13 GLKJ-250F 2500*910*2050 2~8 1925 2.84 GLKJ-375F 375...
Ọnụ ụzọ iko kwụ ọtọ...
Video Open Chiller Parameter Ụdị Ụdị Mpụga (mm) Oke okpomọkụ (℃) Mpaghara ngosi dị irè (L) GLKJ Glass Door Chiller GLKJ-1309FM (2 Door) 1250*905*2050 2~8-960G 1909FM (3 ọnụ ụzọ) 1875*905*2050 2~8 1445 2.4 GLKJ-2509FM (4 ọnụ ụzọ) 2500*905*2050 2~8 1925 3.24 GLKJ-3809FM Uru eduga imewe na mara udi. warara aluminum alloy etiti na-abụghị okpokolo agba na-eme ...
Ụdị nkwụnye Compresso...
Video Open Chiller Parameter Ụdị Ụdị Ụdị Mpụga Mpụga (mm) Okpomọkụ Oke (℃) Mpịakọta dị irè (L) XYKW Glass Door Upright Chiller Plug-in XYKW-1207YC 1220*650*1920 1~10 510 XYKW-18025Y9 1~10 760 XYKW-2407YC 2425*650*1920 1~10 990 Remote XYKW-1207FC 1220*650*1920 1~10 550 XYKW-1807FC 1825*6501*1920FC ~ 10 1080 Uru anyị Ikuku jụrụ oyi, ihe ọṅụṅụ na-ajụ oyi ngwa ngwa EBM ika Fans-ama ama ama ...
Ọrụ enyo kwụ ọtọ...
Video Deli Food Showcase Counter Parameter 1. Nhọrọ Nhọrọ: 1135mm ma ọ bụ 960. 2. Nhọrọ compressor ọnọdụ: n'ime compressor ma ọ bụ n'èzí compressor. 3. Enwere ike ịgbakwunye ọkụ ambient na ala. Ụdị Model Mpụga akụkụ (mm) Okpomọkụ nso (℃) Mpịakọta dị irè (L) Mpaghara ngosi (㎡) GGKJ Plug-in Deli Food Showcase Counter GGKJ-1311YS 1250*1135*1190 -1~5 173 1J-195G1*1. *1190 -1~5 259 1.43 GGKJ-2511YS 2500*1135*1190 -1~5 346 1.86 GGKJ-38...
Akaekpe na aka nri...
Vidiyo Deli Food Showcase Counter Parameter 1. Ihe ngosi ihe ngosi n'ụzọ zuru oke dị mma maka ijere ndị ahịa ozi. 2. N'ihu curved iko nwere ike họrọ ekpe na aka nri slide na ofu iko. 3. Plug-in na remote nwere ike kewaa. 4. Enwere ike ịkwado ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ iko na-atụgharị na nkuku. Ụdị Model Mpụga akụkụ (mm) Okpomọkụ nso (℃) Mpịakọta dị irè (L) Mpaghara ngosi (㎡) DGKJ Deli Food Showcase Counter DGBZ-1311YSM 1250*1075*1215 -1~5 210 0...
Ụdị nkwụnye ihe ugboro abụọ ...
Vidiyo agwakọta agwaetiti friza Parameter 1. Compressor n'ime friza agwaetiti, plọg na ụdị, enwere ike ijikọ ogologo oge. 2. Enwere ike ịhazi agba dabere na kaadị agba anyị. 3. Nkata na friza maka kewaa ngwaahịa n'ime akụkụ dị iche iche. 4. shelf na-adịghị jụrụ oyi bụ nhọrọ. Ụdị Model Mpụga akụkụ (mm) Okpomọkụ nso (℃) Mpịakọta dị irè (L) Ngosipụta mpaghara (㎡) ZDZH ngwa mgbakwunye ụdị abụọ n'akụkụ oghere agwaetiti friza ZDZH-0712YA 730*1200*895 -18 ~-22 190 0.63 ZD...
Ọnụ ụzọ ikuku nke Doule Side ...
Video Island friza Parameter 1. Ụdị dịpụrụ adịpụ na compressor ga-etinye n'èzí wee jikọọ na friza agwaetiti nwere ọkpọkọ ọla kọpa. 2. Top iko ọnụ ụzọ nhọrọ. 3. The obosara nwere ụdị abụọ, otu bụ 1550mm, ọzọ otu bụ 1810mm. Ụdị Model Mpụga akụkụ (mm) Okpomọkụ nso (℃) Dị irè olu (L) Ngosipụta mpaghara (㎡) SDCQ ime ụdị warara okpukpu abụọ ikuku outlet agwaetiti friza SDCQ-1916F 1875*1550*900 -18~-22 820 2.50 SDCQ-2. * 1550*900 -18~-22 1050 2.92 SDCQ-3...
Ụdị Arc dị ọkara dị elu M...
Vidiyo Mepee Paramita Chiller Ha nwere ike idowe ha site na ụzọ abụọ 1. Guzoro naanị gị na akụkụ akụkụ n'akụkụ mgbidi ma ọ bụ azụ na azụ. 2. Tinye otu ikpe njedebe na njedebe ọ bụla, mepụta otu set nke chiller mepere emepe ọkara. Ị nwere ike ịhọrọ n'efu dabere na ihe ị chọrọ. Ụdị Model Mpụga akụkụ (mm) Okpomọkụ nso (℃) Dị irè olu(L) Ngosipụta mpaghara (㎡) GLKJ Mepee chiller GLKJ-1309FH 1250*905*1500 2~8 440 1.48 GLKJ-19075FH 902. 2.21 GLKJ-2509FH 2500*905*1500 2~8 880...
nchekwa ụlọ oyi maka ...
Ime nri anụ mmiri ice cream ụlọ Paramete ...
azụ ọhụrụ na anụ fa...
Ime nri mmiri oyi...
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri Co...
Vidiyo Mkpụrụ osisi na ebe nchekwa veaetable Para ...
Pis mechiri emechi nke Bitzer...
Vidiyo Single Bitzer Compressor Condensi...
Gosi friji na friza
Ogo akụrụngwa nju oyi gụnyere friji ngosi na friza eji na nnukwu ụlọ ahịa nwere njikọ chiri anya na nghọta anụ ahụ onye ahịa. Ndị ahịa anyị si n'akụkụ ụwa niile na-akpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị site na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, site na c...
Ihe ngosi refrigeration Shanghai
Site na Eprel 07, 2021 ruo Eprel. 09, 2021, ụlọ ọrụ anyị esonye na ihe ngosi refrigeration nke Shanghai. Ngụkọta ebe ngosi ihe dị ka square mita 110,000. Ngụkọta ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ 1,225 sitere na mba na mpaghara 10 gburugburu ụwa sonyere ...